Naghachi SQL Server Data sitere na Virtual Machine Disk Files, Ndabere faịlụ na Disk Image faịlụ
Home ngwaahịa DataNumen SQL Recovery Naghachi SQL Server Data sitere na Virtual Machine Disk Files, Ndabere faịlụ na Disk Image faịlụ
Ọ bụrụ na gị SQL Server A na-echekwa faịlụ MDF / NDF na faịlụ ndị a:
VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) faịlụ (*. Vmdk). Dịka ọmụmaatụ, ị na-echekwa gị SQL Server MDF / NDF faịlụ na mebere disk na VMWare.
PC VHD Virtual (Virtual Hard Disk) faịlụ (*. Vhd). Dịka ọmụmaatụ, ị na-echekwa gị SQL Server MDF / NDF faịlụ na mebere disk na Virtual PC. Ma ọ bụ ị na-eme nkwado ndabere nke gị SQL Server MDF / NDF faịlụ site na Windows ndabere na weghachite ọrụ.
Ezi faịlụ Acronis (*. Tib)
Norton Ghost faịlụ (*. gho, * .v2i)
Windows NTBackup faịlụ (*.bkf)
Ihe oyiyi ISO (*. Iso)
Faịlụ oyiyi Nero (*. Nrg)
na ịnweghị ike ịnweta data dị na faịlụ MDF / NDF maka ụfọdụ ebumnuche, dịka ọmụmaatụ:
Na-ehichapụ gị SQL Server MDF / NDF faịlụ site na diski mebere na VMWare ma ọ bụ Virtual PC.
Formathazi diski mebere na VMWare ma ọ bụ Virtual PC na ndudue.
Enweghị ike idozi ma ọ bụ bido disk mebere disk na VMWare ma ọ bụ Virtual PC.
The mebere disk na VMWare ma ọ bụ Virtual PC rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi.
Faịlụ ndabere na nkwado ndabere na mpaghara media rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi na ị na-enweghị ike iweghachi gị MDF / NDF faịlụ site na ya.
Ihe oyiyi diski ahụ mebiri emebi ma ọ bụ mebie ma ị nweghị ike weghachite faịlụ MDF / NDF ya na ya.
Na ọtụtụ ndị ọzọ…
Mgbe ahụ ị ka nwere ike ịgbake data na faịlụ MDF / NDF site na ịlele ma weghachite igwe arụmọrụ disk kwekọrọ, faịlụ nchekwa ma ọ bụ faịlụ diski DataNumen SQL Recovery. Naanị họrọ faịlụ faịlị igwe arụmọrụ, faịlụ nkwado ndabere ma ọ bụ faịlụ diski dị ka isi iyi faịlụ ka emezie, DataNumen SQL Recovery ga-enyocha faịlụ isi, nyochaa ya, weghachite ya SQL Server data echekwara na faịlị ahụ, ma wepụta ya na faịlụ MDF ọhụụ ma ọ bụ ederede ederede SQL doro anya nke enwere ike iji wughachi nchekwa data.
Ọ bụrụ na echekwara faịlụ MDF / NDF gị na diski ike ma ọ bụ draịva, ịnweghị ike ịnweta faịlụ MDF / NDF maka ụfọdụ ihe kpatara ya, dịka ọmụmaatụ:
Na-ehichapụ gị SQL Server MDF / NDF faịlụ site na diski ike ma ọ bụ draịva.
Format usoro diski ike ma ọ bụ mbanye n’amaghị ama.
Diski ike ma ọ bụ draịva gị dara ada na ịnweghị ike ịnweta faịlụ ndị ahụ ọzọ.
Mgbe ahụ i nwere ike iji DataNumen Disk Image iji mepụta onyonyo nke diski ike ma ọ bụ draịva, wee nwetaghachi data MDF / NDF site na faịlụ onyogho na DataNumen SQL Recovery.